प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Foshan Chengpai सेनेटरी वेयर कं, लिमिटेड
प्रश्न: शिपिंग पोर्ट कहाँ छ?
A: हाम्रो शिपिंग पोर्ट प्राय: Foshan Port, Guanghzou Port र Shenzhen Port हो।
A: नुहाउने टाउको कति लामो हुन्छ?
बी: नुहाउने टाउको कत्तिको सफा छ र घरमा पानी कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने दुई कारकहरू हुन् जुन नुहाउने टाउको प्रतिस्थापन गर्नु अघि कति लामो हुन्छ भन्ने निर्धारणमा जान्छन्। नुहाउने टाउको हप्तामा एक चोटि सफा गर्नुपर्छ र सफा गरिसकेपछि बन्द नभएको कुनै अवरोध, मोल्ड, वा स्लिमे छ भने प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष नुहाउने टाउको प्रतिस्थापन गर्न केही सिफारिसहरू छन्, जबकि केहीले छ महिना पछि प्रतिस्थापन गर्न भन्छन् ताकि ब्याक्टेरियाको निर्माण हुँदैन र प्रयोगकर्तालाई हानी पुर्‍याउँछ। माथि उल्लेख बिन्दुलाई पूरा गरेमा एलईडी सहित नुहाउने टाउकोको वारंटी दुई वर्ष हो, वारंटी एलईडी बिना स्नान टाउको लागि FIVE वर्ष हो।
Q: के यो एकै समयमा दुई फन्टनहरू सञ्चालन गर्न सम्भव छ?
एक: यो तपाईं खरीद मोडेल मा निर्भर गर्दछ। अधिकांश मोडेलहरूको एकल डायभर्टर वाल्भ हुन्छ जहाँ तपाईं एक पटकमा एउटा प्रकार्य चयन गर्नुहुन्छ। जबकि केहि मोडेलहरू दुई डायभर्टरहरूको साथ प्लम्बिंग हुन्छन् जुन तपाईंलाई एकै समयमा दुई कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ।
Q: मेरो नुहाउने टाउको तातो स्प्रे बान्की हो। मैले के गर्नु पर्छ?
A: यदि तपाईंले एक असामान्य स्प्रे बान्की वा पानीको जेटलाई कुनै असामान्य कोणमा स्प्रिing् गर्नुहुन्छ, जस्तै degree ० डिग्री वा स्प्रेइंग साइडवेज, यो सामान्यतया अवरुद्ध वा आंशिक रूपमा ब्लक गरिएको स्प्रे प्वालबाट हुन्छ।
प्रश्न: मैले नयाँ स्नान टाउको स्थापना गर्दा मैले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ?
A: हो, तपाईं कुनै पनि मात्रा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंको निर्देशकको रूपमा कन्टेनर लोड गर्न सक्दछौं।
प्रश्न: मलाई नुहाउने टाउको, ½ '' वा ¾ '' को लागि कुन आकारको पाइप चाहिन्छ?
A: चेंगपाई स्नान हेड ½ '' आपूर्ति लाइनहरूको लागि सेट अप गरियो। यदि तपाईंसँग supply '' आपूर्ति लाइनहरू छन् भने तपाईं तिनीहरूलाई stub बाहिर स्थान reduce '' मा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: के हामी समेकन कन्टेनर बनाउन सक्छौं?
प्रश्न: म कसरी लेड शावर हेड नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
A: कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक आईटमको बारेमा जानकारी दिनुहोस्।
हामी तपाईंको भुक्तानीको लागि PI बनाउँदछौं। भुक्तानी प्राप्त भएपछि, हामी तपाईंलाई यो सुम्पिनेछौं।
प्रश्न: एक वर्षा स्नान टाउको के हो?
एक: वर्षा स्नान हेड पानी उत्पादन वर्षा जस्तै छ। सबै चेng्पाई स्नान मोडेलहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई पानीको बहाव समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ ता कि यो वर्षाको प्रकार हो जुन उनीहरूलाई आरामदायक छ। यी स्नान टाउको सामान्यतया तिनीहरूमा रबर प्वाल भएको डिस्क जस्तो देखिन्छ।
प्रश्न: वर्षा स्प्रे प्याटर्न कस्तो छ?
एक: यो एक धेरै सुखद प्रभाव हो, अधिक केन्द्रित स्प्रे को लागी अधिकांश व्यक्ति नुहाउन जान्छन्, एक राम्रो विकल्प छ।
Q: के यो चेंगपाई बार मिक्सर स्नानको साथ ओभरहेड शावर तय गर्न सम्भव छ?
A: हो, त्यहाँ बार प्रकारको मिक्सर सहित फिक्स हेड एक्सेसरीजको साथ विभिन्न प्रकारका चेai्पाई बार मिक्सर शावरहरू उपलब्ध छन्।
प्रश्न: मलाई हडपने रेल चाहिन्छ?
A: स्थानीय भवन कोडलाई हडप्ने रेलको आवश्यक पर्दछ। यो पोष्टहरूमा तल्लो माउन्ट गरिएको अतिरिक्त ह्यान्ड्रिल हो, जुन माथि र तल सीढीहरूमा जानका लागि सजिलो पकड प्रदान गर्ने उद्देश्यले हो। यदि तपाईंको प्रोजेक्टमा सिढीहरू समावेश छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको क्षेत्रमा ग्र्याभ रेल आवश्यक छ कि छैन जाँच्न महत्त्वपूर्ण छ।
प्रश्न: मैले लुकाएको मिक्सर नुहाउने को छनोट र स्थापना गर्दा म के जाँच्न आवश्यक छ?
A: जाँच गर्नुहोस् कि भित्ता संरचनाले पानी पाइपहरूको रूटिंग र चयनित मिक्सरको गहिराईमा भवन समायोजन गर्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तातो र चिसो आपूर्तिहरूले राम्रो भित्ता बनाउनु अघि मिक्सरमा सही इनलेटहरू प्रविष्ट गर्दछ। प्लास्टरिंग र मिक्सर शावरको वरिपरि टाइल गर्ने बित्तिकै सुनिश्चित गर्नुहोस् जुन फिल्टर र चेक वाल्भ भावी मर्मतका लागि पहुँच योग्य छन्
प्रश्न: के तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
A: हामी एक निर्माता हो। हाम्रो कारखाना Foshan शहर मा स्थित छ, गुवाzhou्जु शहर र शेन्जेन शहर को नजिकै। तपाईं हामीलाई भ्रमण गर्न स्वागत छ।
प्रश्न: नेतृत्व स्नान हेड भुक्तान अवधि के हो?
A: before०% TT निक्षेप उत्पादन अगाडि, 70०% डेलिभरी भन्दा पहिले भुक्तान गरियो।
Q: के तपाईं हाम्रो डिजाइन उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
A: निश्चित, तपाइँको डिजाइन विकासको लागि उपलब्ध छ यदि नमूनाहरू र प्राप्त गर्दै
A: अग्रिम जम्मा प्राप्त भए पछि यसले १० देखि १ days दिन लिन सक्दछ। निर्दिष्ट वितरण समय आईटमहरू र तपाईंको अर्डरको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
Q: मेरो सिँढी रेल बनाउनु अघि, म जान्न चाहन्छु कस्तो प्रकारको रेलि better राम्रो छ, स्टेनलेस स्टील रेलिंग वा एल्युमिनियम रेलिंग?
A: स्टेनलेस स्टील रेलिंगका लागि रोजाईको सामग्री हो किनभने यसले एल्युमिनियमको तुलनामा उत्कृष्ट शक्ति र कठोरता प्रदर्शन गर्दछ। Aesthetically बोल्दा, इस्पात स्पष्ट लाभ प्रदान गर्दछ। यसको नरमताको कारण, एल्युमिनियम सतह खरोंच र डेन्टहरूको खतरामा पर्दछ, यसलाई सफा गर्न र मर्मत गर्न गाह्रो बनाउँदछ।
प्रश्न: मैले कहिलेकाहीं नुहाउने टाउकोको पछिल्लो पाइपका धागोहरूबाट पानीको स्प्रेहरू भेट्टाएँ। के भयो?
A: समस्या के छ भने मोहर पर्याप्त तंग छैन। पाइपमा जोडिएको पाइपबाट तपाईको नुहाउने टाउको सुकाउँनुहोस् र पाइपमा प्लम्बरको टेपलाई टेफ्लन टेप पनि भनिन्छ। साधारण रूपमा तपाईको नुहाउने टाउको कडा पछाडि पाइपमा पछाडि प्रयोग गर्नुहोस्।